Exercises kune Vakuru muWheelchair - Wiricheya Fitness Solution
Isu tese tinoziva kuti kurovedza muviri chikamu chakakosha chekuchengetedza mararamiro ane hutano. Sezvaungatarisira, izvi zvinoshanda kunyangwe kune vakuru vakuru.
Kunyangwe iwe uine kuremara kana kwete, iwe unofanirwa kugara uchirovedza muviri kuti ugamuchire zvese zvepanyama uye nemanzwiro zvinobatsira zvinounza pamberi. Kurovedza muviri kunokurudzira kurarama zvine hutano sezvinoita kudya kwakaringana. Exercise inokurudzirwa kune vese vanhu zvisinei nezera kana kuremara.
Kudzidzira Vakwegura uye Akaremara
Imwe yedzakanakisa kurovedza muviri iwe yaunogona kuita kushambira. Ose maviri asingakoshese mvura maekisesaizi uye kushambira pamakumbo zvakanaka kurovedza kwemoyo nemapapu nekuve munyoro pamajoini.
Zviri nyore kwazvo kugadzirisa padanho rekushushikana kuti uenzane neyakaenzana hutano hwako ndosaka kushambira iri chiitiko chakakurudzirwa zvakanyanya kune vese vakuru uye Akaremara zvakafanana. Kurohwa kwakasiyana kunopa kurovedzwa kwemhasuru dzakasiyana saka ita shuwa yekuedza ivo vese kuti vawane yaunoda zvakanyanya.
Kudzidzira kune Vakwegura / Vakwegura
Chimwe chiitiko chikuru chekufunga nezvacho ndeyoga. Imwe yakaderera ine simba yekurovedza muviri umo vangangoita vese vanhu vanogona kutora chikamu. Zvisinei neako kugona kwako padanho, pane toni yeyoga poses iwe yaunogona kudzidzira. Iwe unogona kutozviumba zvako.
Kune huwandu hwusingaperi hweeekisesaizi iwe yaunogona kuita pamwe nehuwandu hwezvishandiso zviripo zveiyoga. Zvinhu zvakaita semapuru mafuro, mabhora ekurovedza muviri, uye mhete dzekumisikidza zvese zvinogona kukubatsira iwe kuwedzera akasiyana ezviitwa kana zvinhu zvikatanga kukakavara.
Akagara maekisesaizi anogona kuitwa nevakuru
Kana iwe usiri wekufamba-famba zvakanyanya, unogona kugara uchiedza kugara pasi. Zvinhu zvakaita sekutsika-tsika, mabhasikoro akamira, uye michina yematanho zvese zvigadzirwa zvinomira zvinopa imwe nzira yakapusa yekurovedza muviri.
Kunyangwe yako nzira yaunofarira yekurovedza muviri, zvinokurudzirwa kwazvo kuita chiitiko chemuviri nguva dzese. Kurovedza muviri kunobatsira kuti muviri wako urambe uine hupenyu hwakanaka paunenge uchikupa maonero akanaka paupenyu.